Ngosipụta mmekọrịta - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Gịnị mere CAMERA ji chọọ “njikwa mmekọrịta”
Anyị niile maara na n'oge ụgbọ elu ahụ, drone ahụ ga-enye mgbaàmà mgbapụta na anya ise nke igwefoto agbagha. A ga-ekpughere anya ise ise na mmekọrịta zuru oke, wee dekọọ otu ozi POS n'otu oge. Mana n'ime usoro ọrụ n'ezie, anyị chọpụtara na mgbe drone zipụrụ mgbaàmà na-akpali akpali, enyoghị anya ise ahụ n'otu oge. Gịnị kpatara nke a?
Mgbe ụgbọ elu ahụ gasịrị, anyị ga-ahụ na ikike zuru ezu nke foto ndị nnakọta dị iche iche chịkọtara dị iche. Nke a bụ n'ihi na mgbe ị na-eji otu mkpakọ algọridim, mgbagwoju anya nke ala udidi atụmatụ emetụta data size nke foto, na ọ ga-emetụta igwefoto ngosi mmekọrịta.
Dị iche iche udidi atụmatụ
Ihe mgbagwoju anya nke ihe ndi ahu, ihe otutu ihe igwefoto choro iji dozie, mpikota onu na ide ihe, oge karia iji mezuo ihe ndia. Ọ bụrụ na oge nchekwa ahụ eruo oge dị oke egwu, igwefoto enweghị ike ịzaghachi na mgbaàmà mkpuchi na oge, na ngosipụta-omume na-adịkarị.
Ọ bụrụ na oge etiti etiti ekpughere abụọ dị mkpụmkpụ karịa oge achọrọ maka igwefoto iji mezue usoro foto ahụ, igwefoto ga-echefu foto ndị ewepụtara n'ihi na ọ nweghị ike mezue ikpughe ya n'oge. Ya mere, n'ime ọrụ ahụ, a ga-eji teknụzụ mmekọrịta mmekọrịta igwefoto iji mee ka ngosipụta igwefoto ahụ dị n'otu.
R&D nke mmekọrịta akara technology
N'oge gara aga, anyị chọpụtara na mgbe AT dị na ngwanrọ ahụ, njehie ọnọdụ nke anya m ise na ikuku nwere ike ibu nnukwu oge, ọdịiche dị n'etiti igwefoto nwere ike iru 60 ~ 100cm!
Otú ọ dị, mgbe anyị nwalere na ala, anyị chọpụtara na mmekọrịta nke igwefoto ka dịtụ elu, na nzaghachi dị ezigbo oge. Ndị ọrụ R & D nwere mgbagwoju anya, gịnị kpatara omume na ọnọdụ ọnọdụ nke ihe ngwọta AT buru ibu?
Iji chọpụta ihe kpatara ya, na mmalite nke mmepe nke DG4pros, anyị gbakwunyere oge nzaghachi na igwefoto DG4pros iji dekọọ oge dị iche n'etiti mgbaàmà na-akpata drone na ikpughe igwefoto. Na anwale na ndị na-esonụ anọ ndapụta.
Ebe A: Otu agba na udidi
Ebe C: Otu agba, textures dị iche iche
Ebe D: agba di iche iche na udiri aru
Nsonaazụ nyocha nsonaazụ
Maka ihe nkiri nwere agba mara mma, oge achọrọ maka igwefoto iji mee ngụkọta oge Bayer na ide ihe ga-abawanye; mgbe maka ihe nkiri nwere ọtụtụ ahịrị, ihe onyonyo a na - egosi ọtụtụ oge, yana oge achọrọ maka igwefoto ịpịkọta ọnụ ga - abawanye.
Enwere ike ịhụ na ọ bụrụ na oge nlele igwefoto dị obere ma ederede adịghị mfe, nzaghachi igwefoto dị mma n'oge; mana mgbe igwefoto nlele igwefoto di elu ma odidi a di mgbagwoju anya, oge nzaghachi igwefoto ga - abawanye nke ukwuu. Ma dị ka ugboro nke na-ese foto na-abawanye, igwefoto ga-emecha na-atụ uche-e photos.
Ofkpụrụ nke njikwa mmekọrịta igwefoto
Na nzaghachi nye nsogbu ndị a dị n'elu, Rainpoo gbakwunyere sistemụ njikwa na-achịkwa igwefoto iji melite mmekọrịta nke anya m ise.
Usoro nwere ike ịlele oge- "T" dị n'etiti drone na-eziga mgbaàmà na-ebute na oge ikpughe nke oghere ọ bụla. Ọ bụrụ na oge dị iche "T" nke anya m ise dị n'ime ekwe ekwe, anyị na-eche na ise anya m na-arụ ọrụ synchronously. Ọ bụrụ na ụfọdụ nzaghachi nzaghachi nke anya m ise dị ukwuu karịa uru ọkọlọtọ, ngalaba njikwa ga-ekpebi na igwefoto nwere nnukwu oge-oge, na na ngosipụta na-esote, a ga-akwụ ụgwọ oghere ahụ dịka ọdịiche ahụ si dị ise anya m ga-ekpughe synchronously na oge-iche ga-mgbe niile n'ime ọkọlọtọ nso.
Ojiji nke ngakọrịta njikwa na PPK
Mgbe ịchịkwa mmekọrịta nke igwefoto, na nyocha na nkewa oru ngo, PPK nwere ike iji belata ọnụ ọgụgụ nke akara isi. Ka ọ dị ugbu a, e nwere ụzọ njikọ atọ maka igwefoto oblique na PPK:
1 Ejikọtara otu n'ime anya m ise na PPK
2 All lenses jikọọ na PPK
3 Jiri teknụzụ mmekọrịta mmekọrịta igwefoto iji nyeghachi azụ uru PPK
Otu n'ime nhọrọ atọ a nwere uru na ọghọm:
1 Uru dị mfe, ọghọm bụ na PPK naanị na-anọchi anya ọnọdụ gbasara oghere nke otu lens. Ọ bụrụ na ejikọtaghị anya m ise ahụ, ọ ga-eme ka njehie ọnọdụ nke lens ndị ọzọ pere mpe.
2 Uru ahụ dịkwa mfe, nhazi ahụ ziri ezi, ọghọm bụ na ọ nwere ike ịdọrọ modulu dị iche iche
3 Ihe ndị bara uru bụ ọnọdụ ziri ezi, ntụgharị dị elu, na nkwado maka ụdị dị iche iche nke modulu dị iche. Ihe ọghọm bụ na njikwa ahụ na-agbagwoju anya ma ọnụ ahịa ya dị elu.
E nwere ugbu a drone na-eji 100HZ RTK / PPK bọọdụ. Ejiri igwefoto Ortho iji rụọ ọrụ bọọdụ ahụ iji nweta 1: 500 topographic map njikwa-enweghị ntụpọ, mana teknụzụ a enweghị ike ị nweta akara-akara-akara n'efu maka foto oblique. N'ihi na njehie mmekọrịta nke anya m ise ahụ dịkarịrị ukwuu karịa nhazi ọnọdụ nke ihe dị iche, yabụ ọ bụrụ na enweghị igwefoto mmekọrịta ọ bụla dị elu, ọdịiche dị elu enweghị isi ……
Ka ọ dị ugbu a, usoro njikwa a bụ njikwa na-achịkwa, na ịkwụ ụgwọ ga-eme naanị mgbe njehie mmekọrịta igwefoto karịrị ọnụ ụzọ ezi uche dị na ya. Yabụ, maka ọnọdụ nwere nnukwu mgbanwe na udidi, a ga-enwerịrị mmejọ nke onye ọ bụla karịa ọnụ ụzọ,. N'ime ọgbọ Rie usoro ndị ọzọ, Rainpoo amalitela usoro njikwa ọhụrụ. E jiri ya tụnyere usoro njikwa dị ugbu a, enwere ike ịme ka mmekọrịta igwefoto rụọ ọrụ nke ọma site na opekata mpe nke ogo wee ruo ọkwa ns!